Huawei Ekwentị mmepụta oyiri Nyefee data na faịlụ na Smartphone ọhụrụ 🥇 Emulator.online ▷ 🥇
You zụta ohuru ama na ugbu a ị ga-achọ nyefee gị niile data gị ochie mobile ka ọhụrụ gị? Azịza ya bụ Mmepụta oyiri nke Huawei, ngwa nke ụlọ ọrụ China ama ama mepụtara, mezue, multiplatform ma yabụ dakọtara na gam akporo na iPhone.
Ngwa a dị mma maka ndị gbanwere site na iPhone gaa na ama ọhụụ gam akporo na, karịa ihe niile, maka ndị na-agbanwe ekwentị Huawei na akara ọzọ (ebe ọ bụ na ekwentị Huawei na-ere ihe na-erughị oge gara aga).
G ALKWUO:Nyefee data site na otu gam akporo mobile gaa na nke ọzọ na akpaghị aka
con Mmepụta oyiri nke Huawei O kwere omume:
nyefee data si iPhone/iPad ama ama Huawei na nke ọzọ;
nyefee data si iPhone/iPad ama ama android na nke ọzọ;
nyefee data site na smartphone android ama ama Huawei na nke ọzọ;
nyefee data n'etiti smartphones Huawei.
Nyefee faịlụ na data
yo data nke nwere ike ibufere site na Mmepe ekwentị dị ka ndị a:
oku na ndekọ;
Maka ihe nchekwa maka android enwere data na Ee e nwere ike ibufere:
data sitere na ngwa dika WhatsApp;
data na igwe ojii: dịka ọmụmaatụ, foto echekwara na Foto Google;
Olee otú agafeta data na ekwentị mmepụta oyiri
1) Mbụ mkpa ka ị wụnye free ngwa Mmepe ekwentị na ngwaọrụ abụọ. Ọ bụrụ na ndị smartphones bụ ma Huawei ị ga-ahụ ngwa awụnyereworị.
2) Ozugbo ngwa ebudatara, ọ ga-emeghe na ma ngwaọrụ na ịpị "Inabata" N'okpuru aka nri;
3) Na ngwaọrụ abụọ, nkwenye inwe ike ịnweta data gị;
4) Ozugbo i nyere nkwenye gị ochie ama, igwefoto ga-emeghe na-arịọ gị ka etiti a Koodu QRmgbe na smartphone ọhụrụ ị ga - ahọrọ ụdị nke ekwentị ochie n’etiti "Huawei", "Ọzọ gam akporo", "iPhome / iPad". Họrọ nke ziri ezi na Koodu QR.
5) na ochie ama, etiti ahụ Koodu QR: site na ebe a njikọ njikọta n'etiti ngwaọrụ abụọ ahụ ga-amalite, mgbe ahụ nkwenye njikọ onye ọrụ site na mpio mmapụta.
6) Ugbu a, i nwere ike na-egosi nke faịlụ nyefee si ochie ama "Igosiputa"ndị na-amasị gị.
7) pịa "Nkwenye" na usoro mwepụ data ga-amalite na akpaghị aka.
A na-ebufe data a site na njikọ nke ụdị WiFi kere na nke a n'etiti ngwaọrụ abụọ: n'ụzọ dị otú a usoro ga-abụ nchekwa mi ngwa ngwa.
Ọ bụrụ na ịnwere ọtụtụ data, Mbugharị nwere ike iwe ọtụtụ nkeji, mana oge fọdụrụnụ ga-egosi na ihuenyo ahụ. Ọ bụrụ na etinyere njikọ dị n'etiti smartphones, a ga-emeghachi usoro ahụ ma nyefe ga-amalitegharị site na ebe ọ kwụsịrị.
G ALKWUO: Gbanwee si gam akporo na iPhone ma nyefee data niile